မလေးရှား၊ နိုင်ငံ​အလံ​ပြောင်းလဲ​ခြင်း​အဆို​အပေါ်​အုတ်အော်​သောင်း​နင်း​ဖြစ်​ခြင်း · Global Voices မြန်မာ
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 17 နိုဝင်ဘာ 2012 11:28 GMT
၂​၀​၁​၂ ခု​နှစ် စက်တင်ဘာ​လ အစော​ပိုင်း​တွင် အတိုက်​အခံ​ပါ​တီ​၏ မလေးရှား​နိုင်ငံ​အလံ​ကို​ပြောင်းလဲ​ရန် တင်​သွင်း​သည်​ဟု ယူဆ​ရ​သော အဆို​အပေါ် အုတ်အော်​သောင်း​နင်း​အနည်းငယ် ဖြစ်ပွား​ခဲ့​သည်။ ယခု​လက်​ရှိ​အလံ​သည် အစိုးရ​အဖွဲ့​များ ပူးပေါင်း​ခြင်း​အသွင်​သဏ္ဍန်​နှင့် အလွန်​တူ​ပြီး အဆို​တင်​သွင်း​ထား​သော အလံ​အသစ်​မှာ​မူ စင်​ကာ​ပူ​နှင့် အင်ဒို​နီး​ရှား​အလံ​များ​နှင့် ပိုမို​အသွင်​သဏ္ဍန်​တူ​သည်​ဟု အတိုက်​အခံ နိုင်ငံ​ရေး​သမား​တစ်​ဦး​၏ ဖေ့စ်​ဘွတ်(ခ်)စာ​မျက်​နှာပေါ်​တွင် ရေးသား​ထား​ကြောင်း​ကို အယ်ရှာ့ အဒ​လီ​နာ ကာ​ရင်(မ်) ဆို​သူ​က​အောက်​ပါ​အတိုင်း​ရေးသား​ထား​ပါ​သည်
ပီ​အာ(ပ​က​တန် ရ​ကျက်၊ အတိုက်​အခံ​အစု​အဖွဲ့)က​မလေးရှား​ကို ထိန်း​ချုပ်​ခွင့်​ရ​ပြီး​ရင် သူ​တို့​က​မလေးရှား​နိုင်ငံ​ရဲ့​အလံ​ကို အသစ်​ပြောင်း​မယ်​ဆို​တာ​က စင်္ကာ​ပူ​နဲ့ အင်ဒို​နီး​ရှား​က သမ္မတ​နိုင်ငံ မလေးရှား​ကို​လည်း​သမ္မတ​နိုင်ငံ​လုပ်​ဖို့​ရည်​ရွယ်​တာ​ပါ။
အဆို​ပြု​ထား​သော အလံ​အသစ်​ဒီ​ဇိုင်း​အပေါ်​မှ လက်​ရှိ မလေးရှား​အလံ​ပုံ။ ဓာတ်​ပုံ – အယ်​ရှာ အဒ​လီ​နာ​၏ ဘ​လော့(ဂ်)
ဆစ်(ခ်)ဖေ​လယ်​စီကတော့​အထူး​သ​ဖြင့် လွတ်လပ်​ရေး​နေ့​ကျင်းပ​နေ​စဉ်​တွင် ထို​ကဲ့သို့ သ​တင်း​မျိုး​ထွက်​လာ​ခြင်း​သည် ရှက်​စရာ​လုပ်​ရပ်​ဟု ထင်မြင်​ခဲ့​သည်။
မာဒေးကား(လွတ်လပ်​ရေး​နေ့)ဆို​တာ စည်း​လုံး​ညီညွတ်​ခြင်း​အတွက်​ပဲ ဖြစ်​သင့်​ပါ​တယ်။ ကျွန်တော်​တို့ တစ်​နိုင်ငံ​တည်း​သား​အနေ​နဲ့ အတူတကွ ရပ်​တည်​ပြီး​တော့​ကျွန်တော်​တို့ နိုင်ငံ​အတွက် တိုက်​ပွဲဝင်​သင့်​တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ​နှစ်​ရဲ့​မာ​ဒေး​ကား အခမ်းအနား​မှာ​တော့ လွတ်လပ်​ရေး​ဆို​တဲ့ အာဘော်​ကို​တောင် သဘော​မ​တူ​နိုင်​ဘူး။ ကျွန်တော်​တို့​နိုင်ငံ​ရဲ့ မွေး​နေ့​ပွဲ​ကို​တောင် အတူ​ထိုင်​ပြီး မ​ကျင်းပ​နိုင်​ဘူး။ အခမ်းအနား​နှစ်​ခု၊ အမှတ်​တံဆိပ်​နှစ်​ခု​နဲ့ အလံ​တောင်​မှ​နှစ်​ခု​နဲ့ ကွဲပြား​ခဲ့​ကြ​တယ်။
ဟုတ်​တယ်၊ ကျွန်တော်​တို့​နိုင်​ငံတော်​အလံ​ဟာ အမေ​ရိ​ကန်​အလံ​တို့​လို​မျိုး​နဲ့ ဆင်​နေ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါ​ဟာ အလွန်​အရေးကြီး​တဲ့ မာ​ဒေး​ကား​အခမ်းအနား​ည​မှာ ခင်ဗျား​တို့​ကို ကျွန်တော်​တို့​အလံ​အပေါ် ဂုဏ်​ယူ​စွာ​နဲ့ သရော်​ဖို့ အခွင့်​အရေး​ပေး​နေ​တာ မဟုတ်​ဘူး။ ဒါ​မျိုး​လုပ်​ဖို့ ခင်ဗျား​တို့​ကိုယ် ခင်ဗျား ဘယ်​သူ​တွေ​လို့ ထင်​နေ​တာ​လဲ။ တိုင်း​ပြည်​အတွက် ရှက်​ဖို့​ကောင်း​လိုက်​တာ။ လိုက်​ဘေး​ရီး​ယား​အလံ​က​လည်း ယူ​အက်စ်​အလံ​နဲ့ ဆင်​တူ​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်​ရေး​နေ့​အခမ်းအနား​မှာ ဘယ်​လိုက်​ဘေး​ရီး​ယား​ပြည်​သူ​တွေ​က သူ​တို့​အလံ​ကို​မနှစ်​မြို့​ကြောင်း​ပြတာ တွေ့​ဖူး​လို့​လဲ?
ကျွန်တော့်​အထင် တကယ်​လို့ ပီ​အာ(ပ​က​တန် ရ​ကျက်၊ အတိုက်​အခံ)ပါ​တီ​သာ နောက်​လာ​မယ့် ၁​၃​ကြိမ်​မြောက် အထွေ​ထွေ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​မှာ အနိုင်​ရ​ရင် ဒါ​တွေ​ဟာ မလေးရှား​မှာ သေချာ​ပေါက်​ဖြစ်လာ​မယ့် အရာ​တွေ​ပဲ။ ပီ​အာ​ပါ​တီ ကြည့်​ရ​တာ အစိုးရ(ဝန်ကြီး​အဖွဲ့)သာ​မက​ဘဲ မလေးရှား​ရဲ့ ကိုယ်​ပိုင်​လက္ခဏာ​ကို​ပါ ပြောင်းလဲ​ချင်​ပုံ​ရ​တယ်။ အလံ​အသစ်၊ နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​အသစ် နှင့် နာမည်​အသစ်​တောင် ဖြစ်​ရင်​ဖြစ်​မ​လား​ပဲ။
ဆိုဒျ အက်​က​ဘာ အလီ က​လည်း ဤ​ကိစ္စ​အပေါ် မ​ကျေနပ်​ကြောင်း ထုတ်ဖော်​ခဲ့​သည်မှာ၊
Protesters brandishing the proposed new flag. Photo from blog of Syed Akbar Ali
ကဲ ကဲ ဒီ​ပုံ​တွေ​ကို​ကြည့်​လိုက်​ပါ​ဦး။ မော်တော်​ဆိုင်​ကယ်​ကို တစ်​နေရာ​ရာ​မှာ ရပ်​ထား​တဲ့ င​ပြိန်း​တွေ တွေ့​ရ​တယ်။ ပထမ​ဓာတ်​ပုံ​မှာ ပါ​က​တန်​ရာ​ကျက်​ပါ​တီ ထောက်ခံ​သူ​တွေ​က ကျွန်တော်​တို့ အမျိုးသား​အလံ​အစား (အဲ​ဒီ​ပုံ​ကို ကြည့်​ရ​တာ) သူ​တို့​အစားထိုး​ချင်​တဲ့ တခြား​အလံ​ကို​လွင့်​ထား​တာ​ကို ပြ​ထား​ပါ​တယ်။ ဒီ​တော့ သူ​တို့​လည်း မလေးရှား​အလံ​ကို ပြောင်း​ချင်​နေ​ကြ​တယ်။
နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​ရော ဘယ်​လို​လဲ။ သူ​တို့​အလံ​ကို ပြောင်း​မယ်​ဆို နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​ကို​ရော ဘာ​လို့​မ​ပြောင်း​တာ​လဲ။ သီချင်းက ​ဟောင်း​တဲ့​အထဲ ပါ​နေ​ပြီ​လေ။ တချို့​က​ဆို ပျင်း​စရာ​ကောင်း​တယ်​လို့​တောင် ပြော​ရင် ပြော​ကြ​မှာ။ ပြော​လို့​မ​ရ​ဘူး၊ သူ​တို့​တွေ နိုင်​ငံတော်​သီချင်း အသစ်​ကို​ရေး​ထုတ်ပေး​ဖို့ namewee [မှတ်ချက်။ ။မလေးရှား​နိုင်ငံ​အပေါ် ၄င်း​၏​အမြင်​ကို နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​အား ဖျက်​ပြီး ရေးစပ်​ခဲ့​သူ တရုတ်​နွယ်​ဖွား မလေးရှား​နိုင်ငံသား]ကို​တောင် ခေါ်​ချင်ခေါ်​နိုင်​တယ်။
ပြီး​တော့ ဘာ​လို့​အလံ​နဲ့ နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​မှာ​တင် ရပ်​နေ​မှာ​လဲ၊ နိုင်ငံ​နာမည်​ကို ပြောင်း​လိုက်​ရင်​ရော။
ကြီး​မြတ်​သော မ​လာ​ယာ​လမ်​ဆို​ရင်​ရော၊ ဒါ​မှ​မဟုတ် ကြီး​မြတ်​သော​နန်​ယန်း၊ ကြီး​မြတ်​သောတ​မီးလ် အီး​လမ်၊ တောင်​ပိုင်း ဟင်​ဒူ​စ​တန်၊ စင်​ကာ​ပူ​မြောက်​ပိုင်း၊ စင်​ကာ​ပူ​မြောက်​ဘက်​ဆိပ်ကမ်း၊ ဒီ​မှာ​ပို​ပြီး​ခေတ်​မီ​တဲ့​နာမည်​ပါ- ကြီး​မြတ်​သော ဘန်​ဆား၊ ဒါ​မှ​မဟုတ် ကြီး​မြတ်​သော ဒ​မန်​ဆာ​ရာ၊ Peninsula.com ဆို​ရင်​ရော။
ထင်ရှား​သော အတိုက်​အခံ​နိုင်ငံ​ရေး​သမား​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သူ လင်(မ်)ကစ်​ဆန်း က ဤ​သက်သေ​အထောက်​အထား​မ​ရှိ​သော​ပြောဆို​ချက်​ကို သူ​၏​ဘ​လော့​တွင် ငြင်း​ဆို​ထား​သည်။
ပ​က​တန်​ရာ​ကျက်​ပါ​တီ​သည် မလေးရှား​နိုင်ငံ​၏​အလံ​ကို အစားထိုး​ပြောင်းလဲ​မည်​ဆို​သော ကောလာဟလ​နှင့်​ပတ်​သတ်​၍ ပြန်လည်​ဝေဖန်​တိုက်ခိုက်​ရန် ယမန်နေ့​က​ဝန်ကြီး​ချုပ် ဒါ​တွတ်​ဆ​ရီ နာ​ဂျစ်(ဘ်) ရာ​ဇတ်(ခ်)ကိုယ်တိုင် ညီညွတ်​သော​မ​လေး​အမျိုးသား​အဖွဲ့​အစည်း​မှ အထက်​တန်း​ဝန်ကြီး​သုံး​ဦး​ကို ဦးဆောင်​လိုက်​သည်မှာ ညီညွတ်​သော​မ​လေး​အမျိုးသား​အဖွဲ့​အစည်း​နှင့် ပတ်သက်​ပြီး ၄င်း​တို့​၏ ကြံမိ​ကြံ​ရာ​တုန့်​ပြန်​မှု​များ​သည် အမှန်​တရား​ကို​လေးစား​ခြင်း​ထက် ၄င်း​တို့​၏ (၁​၃) ကြိမ်​မြောက်​ရွေး​ကောက်​ပွဲ​ဖြစ်မြောက်​ရေး​ကို အရာ​ရာ​အားလုံး​ထက်​ပို​ပြီး အလေး​ထား​နေ​ကြောင်း ထင်​ဟပ်​စေ​သည်။
နိုင်​ငံတော်​အလံ​ပြောင်းလဲ​ခြင်း​သည် ပ​က​တန် ရာ​ကျက် ပါ​တီ​၏ လုပ်​ငန်း​စဉ်​လုံး​ဝ​မဟုတ်​ပေ၊ ထို့​အပြင် ထို​ကိစ္စ​ကို​ပါ​တီ​၏ အစည်းအဝေး​ပွဲ​တွင် တင်ပြ​ဆွေးနွေး​ဖူး​ခြင်း​မ​ရှိ​ပေ။ သို့သော် UMNO/BN မှ​ညစ်ပတ်​လှ​သော​လှည့်​စား​မှု​ဌာန​က ပီ​အာ (ပါ​က​တန် ရာ​ကျက်​ပါ​တီ)က​နိုင်​ငံတော်​အလံ​ကို​ပြောင်းလဲ​လို​သည်၊ သို့မဟုတ်၊ ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အခြေ​ခံ​ဥပဒေ​နှင့်​ညီ​သော​စနစ်​ကို ဖျက်​သိမ်း​လို​သည်​ဆို​သော သက်သေ​မ​ရှိ​သည့် စွပ်စွဲ​ချက်​နှင့် ဤ​တိုက်ခိုက်​မှု​များ​ကို အတိ​အလင်း​လုပ်ကြံ​ခဲ့​ပါ​သည်။
၂​၀⁠၀​၉ ခု​နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ​လ​တွင် ချ​မှတ်​ခဲ့​သော ပါ​က​တန်​ရာ​ကျက် ဘုံ​မူ​ဝါဒ​ဘောင် နှင့် ၂​၀​၁​၀၊ ဒီဇင်ဘာ​လ​တွင် လိမ္မော် (ခေါ်) ရေ​ရှည်​အုပ်ချုပ်​ရေး​စီမံ​ခံ့​ခွဲ​မှု ပင်မ​အစီ​အစဉ် တို့​အပါအဝင် ပါ​က​တန်​ရာ​ကျက်​၏ အမျိုး​မျိုး​သော မူ​ဝါဒ​ကြေညာ​ချက်​များ​က မလေးရှား အမျိုးသား​ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အခြေ​ခံ​ဥပဒေ​အတွင်း အခြေ​ခံ​ကျ​သော အစီ​အစဉ်​များ​အား ထိန်းသိမ်း​ရန်၊ အထူး​သ​ဖြင့် “ဖွဲ့​စည်း​ပုံ​အခြေ​ခံ​ဥပဒေ​နှင့်​ညီ​သော အဖွဲ့​အစည်း​များ​၏ အခန်း​ကဏ္ဍ​နှင့်​တာဝန်​ကို ကာ​ကွယ်​ရန်”သည် ပီ​အာ​၏ တာဝန်​ကျေပွန်​မှု​ကို အလေး​အနက်​ဆို​ပြ​ခဲ့​သည်။
ဝန်ကြီး​ချုပ်​နှင့် ညီညွတ်​သော​မ​လေး​အမျိုးသား​အဖွဲ့​အစည်း​မှ အထက်​တန်း​ဝန်ကြီး​များ​အနေ​ဖြင့် ပီ​အာ​ပါ​တီ​က​နိုင်ငံ​အလံ​ကို​ပြောင်းလဲ​၍ မလေးရှား​ကို​သမ္မတ​စနစ်​ပြောင်းလဲ​ချင်​သည်​ဆို​သည့် ကောလာဟလ​က​ကို ဝန်ကြီး​များ​ထပ်ခါထပ်ခါ​ပြော​နေ​စဉ်​တွင် ပီ​အာ​ပါ​တီ ကို​ဆန့်​ကျင်​၍ ညီညွတ်​သော​မ​လေး​အမျိုးသား​အဖွဲ့​အစည်း​မှ အောက်​တန်း​ကျ​သော လှည့်​စား​မှု​ဌာန​၏ မုသား​နှင့် မ​မှန်ကန်​သော လှုံ့ဆော်​မှု​ကို ဦးဆောင်​နေ​သည်မှာ အလွန်​တာဝန်​မဲ့​ရာ​ကျ​သည်။